Dubai Job WhatsApp & Qoritaanka Mobile ee Bariga Dhexe
Ku biir kooxda Whatsapp ee shaqooyinka Dubai
Published by Shirkadda Dubai City at November 8, 2017
Dubai Job WhatsApp & Qorista
Dubai Job WhatsApp & Shaqaalaysiinta leh Shirkadda Dubai City. Guud ahaan, waxaan ka hadlaynaa Aagga Magaalada Dubai ee loogu talagalay shaqo-bixinta ka badan WhatsApp. Xaqiiqdi waan awoodnaa inaan kaa caawinno inaad ku haajirto Imaaraadka Carabta. Tusaale ahaan, waxaan dejinay inka badan konton kun oo kharash oo cusub caasimada Imaaraadka Carabta Emirates. Dhab ahaantii, waad ka mid noqon kartaa qurbahaan,
Sababtoo ah noo Shirkadu waxay kaa caawineysaa inaad hesho fursadda shaqo aad ka rabtid United Arab Emirates. Waxaan halkaan kuugu joognaa annaguna waan raadinaynaa meel aad ku jirto UAE. Dhamaan waxaan u baahanahay qaab adiga ayaa ah inaan ku xirno WhatsApp. Inta ugu badanna, waxaad shaqo ka heli kartaa Dubai.
Si aad ugu dhigto qaab kale shirkaddeena waad ku biiri kartaa dhammaystirka liiska Kooxda WhatsApp gudaha UAE. Xaaladahaas oo kale, si fudud ayaad u heli kartaa shaqo shaqooyinka bannaan Dubai Shirkadda Magaalada. Marka la eego qodobbadaas, in ka badan shaqo doonka 50,000, toddobaad kasta sii wad hubinta Shaqooyinka waxay bixiyaan WhatsApp. Bartamaha ee telefoonka gacanta shaqaaleynta, markasta waad soo laaban kartaa for more boostada ee Dubai. Safka hore, ilaa waqtigan xaadirka ah, WhatsApp wuxuu ku korayaa in kabadan 1,6 milyan isticmaale oo ku sugan Bariga Dhexe.
Farriin ku saabsan WhatsApp si aad shaqo uga hesho Dubai
Bartamaha shaqooyinka taleefanka gacanta raadinta Shabakadda shaqooyinka Dubai. Dhinaca wanaagsan ee shirkadeena, waxaan hubnaa inaad ugu yaraan maqashay Qorshaha WhatsApp. Waxaa la yaab leh, sida xaqiiqda ah, waxaan sameyneynaa kooxaha shaqaaleynta ugu caansan gudaha Dubai City. Maaha in la xuso barnaamijka fariimaha deg-degga ah ee Bariga Dhexe. Dhanka kale, waxaan heysanaa xirmooyin 20,000 ah wakiilada qorista ee google. Murashaxiinta waxaan u adeegsaneynaa codsigeena mobile-ka ee shaqaalaynta. In nuurka ah in shaqo lagu helo Dubai, waxaad tahay farriin keliya! sidaas kor u qaado resumeygaaga maanta.
Dubai Job WhatsApp - Sii dhaqso!
WhatsApp - Qalabka Qoritaanka ee ugu Badnaanta Bariga Dhexe?
Ujeedada loogu talagalay wargeyska WhatsApp Isu-qoridda UAE. Aynu eegno rajada ah inaad ka heli doonto sabab sabab u ah isticmaalka WhatsApp wax weyn ayey u tahay shaqo ka helista UAE. Si aad uhesho qaab kale, Wicitaanka heesaha Whatsapp waa doorasho wanaagsan oo lagu gudbin karo wareysiga Dubai. Xaaladahan oo kale, marka aad fureyso xisaabta WhatsApp waxaadna soo dejisan kartaa WhatsApp waxaad ku biiri doontaa 50,000 musharaxiinta Bariga Dhexe. Dhinaca kale, dadka qurbojoogta ah waxay u baahan yihiin inay furaan bog cusub. Tusaale ahaan shirkadda Careerjet iyo Shirkadda Monster ee UAE. Runtii waxay mudan yihiin diiwaangelin sare. Intaa waxaa sii dheer, samee koonto shaqo oo bilaash ah oo la raadinayo.
Dubai Job WhatsApp? Haa, waad ka dhici kartaa Dubai.
Kooxda Shaqaaleynta WhatsApp
Waa maxay sababta loo shaqaaleysiinta WhatsApp si aad u caan ah Asia?
Waqti ka waqti WhatsApp maareynta shaqooyinka koox caawisa shaqo doonka Hindiya. Meesha ugu horeysa halkee Shaqooyinka Whatsapp ee Hindiya caan ka noqo shirkadaha shirkadaha qiimeynta sare leh ee Aasiya aaladda qorista bilaashka ah. In daqiiqad ah geedi socodkan oo dhami wuxuu si gaar ah ugu noqonayaa Shaqooyinka WhatsApp. Iyadoo tan tan maskaxda lagu hayo farriinta tooska ah ee barnaamijyada mobilada waxay noqdeen kuwa caan ah ilaa 2013. Ku celcelinta taas oo Kooxda WhatsApp is sida ugu fiican ee shaqo looga helo Hindiya Gacanka ?.
Xaaladdan oo kale, mid kasta oo ka mid ah wuu fiicanyahay. Sida la arki karo, dad badan ayaa ka guuraya Hindiya kuna sii jeedda Dubai. Isku soo wada duuboo, waxaan hadda helnay shabakad ka badan shaqo doonka 80,000. Ka dib oo dhan, in ka badan kanaalada warbaahinta bulshada, waxaan gaarnay in ka badan 3,2 bilyan oo musharraxiinta WhatsApp ah. Iyadoo fiirogaar ah la siinayo shaqo doonka ee Dubai iyo isticmaalaha mareegta bulshada ee IMNUMX. Isticmaalayaasha Hindiya iyo Bariga Dhexe iyo qaar ka mid ah UK.
Dubai Job on WhatsApp gudaha Hindiya
Muhiim u ah in la ogaado in lala socdo dhageystayaasha sida badan Hindiya iyo Pakistan. WhatsApp aad ayey kuu siisaa ikhtiyaarrada wanaagsan ee barashada shaqo raadinta. Dhanka kale waxay wataan xog aad u weyn oo musharrixiin kara asal ahaan kasoo jeeda Aasiya. Waxaan heli karnaa maaraynta shaqaaleynta aad ufiican si aan u bilowno nidaamka shaqaaleynta. Caddaynta ugu badan ee qasbaya musharraxiinta iyagu raba inay is diiwaangeliyaan annaga ayaa bixinnaa fiisada I caawi. Dubai Job WhatsApp way kaa fogtahay haddii tusaale ahaan waqti badan aadan ku bixin mobilada.
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad ku qaadato ilaa 120 daqiiqo maalin kasta taleefankaaga casriga ah. Diritaanka codsiyada shaqada iyo mustaqbalka fog weydiisashada kaalmada shaqada. Hagayaasha shaqo raadinta ayaa leh, ugu fiicani waa huteellada 7-star, inta badan, waxaad u baahan tahay inaad si dhakhso leh ugu dirto farriin xasaasi ah hayadaha shaqaalaynta. Guud ahaan isla markiiba su’aasha ku saabsan a Dubai Job on WhatsApp waxay u badan tahay in laga jawaabi doono.
Dubai Job WhatsApp - Wixii Faahfaahin Caalami ah
Dubai Job waxay ka soo degtay Hindiya ilaa Dubai iyagoo isticmaalaya WhatsApp
Dhanka kale, waxaan u baahanahay inaan wax ka qorno dib u dejinta Hindiya iyo Pakistan si Dubai. Dhinaca wanaagsan, WhatsApp ee India iyo UAE way ka caansan yihiin dalalka kale. Sooner ama wakhti dambe shaqaalaheennu waxay helayaan jawaab degdeg ah oo ka yimaada kooxda qorista ee Dubai. Dhamaanba kedib marka ugu horeysa ee macaamiisha helaya email ama wicitaan telefoon ah oo ka yimaada shaqaale qorayaasha ee UAE. Qeybta ugu badan oo aan dib loo dhigin, waa inaad iska diiwaangelisaa shirkaddayada.
Ilaa waqtigan xaadirka ah, waxaan abuurnay kooxo 50 Dubai Job WhatsApp ee UAE. Iyada oo dareenka faahfaahinta markaad ka fekereyso dhaqaaqin Dubai waa inaad la xiriirtaa oo aad hubisaa shirkadda shaqaaleynta. Iskuxirnaansho iyo akhlaaq wanaagsan waa inaad kudhacdaa faahfaahinta ay kusiinayaan. Iyo dhamaan waxyaabaha aad waa inaad tixgelisaa adeegyada kaa caawinaya inaad u guurto dalka dibedda.
Dubai WhatsApp Shaqaaleeyayaashu way caawiyaan
In view of Kuwa qora Dubai tusaale ahaan mid cusub mustaqbalkiisa gudaha Imaaraadka. Muuqaalkaas quruxda badan ee shaqaalaysiinta WhatsApp. Waxay u oggolaan doontaa loo-shaqeeyaha iyo / ama shaqaaleeyaha natiijada ka dhalan karta wadahadalka mobilada fudud. Sababtaas awgeed ayaa loo raadinayaa qorista musharrixiinta dhajinaysa xayeysiinta pdf ama xayeysiis sawir. Macluumaad ahaan halkii laga raadin lahaa habka raadinta ee loogu talagalay 100 ee murashaxiinta khadka tooska ah. Natiijooyinka iyo wakiilo nidaamka keydinta waqtiga weyn leh oo xafid heer sare ah ku haya taleefanka gacanta.
In ka falanqaynta ugu dambeysa ee shaqo doonka, faahfaahinta xiriirka waxaa laga heli doonaa wax ka yar 1 min. In kasta oo xirfad-yaqaanno cusub ay ogaadaan oo ay la soo xiriiraan Dubai Shaqooyinka Maamulaha shaqaaleynta WhatsApp. Shuruudda inaad heer sarre hayso shaqo raadinta profile firfircoon on mobile. Iyada oo ujeeddadan tahay in lagu biiro kooxaha shaqooyinka UAE iyo ka qaybgalka shaqo raadinta doodaha. Codsiyada ka badan moobiilka ayaa waliba kordhin doona fursadaha helitaanka Job Job.
WhatsApp leeyahay shaqeeyayaasha firfircoon
Wixii hal shay, sida xaqiiqda ah, dhowr bilood ka dib soo dejinta WhatsApp codsi codsi. 86% dadka isticmaala, dabcan, wali waxay ku firfircoon yihiin goobta. In kasta oo aad la sheekaysanayso asxaabta isla mar ahaantaana aad shaqo raadinayso. Hubaashii kuwa shaqaalaynta xog raadinta shaqa doonka ah ee ku qoran Dubai waxay kugu habboonaan karaan booska riyada. Tusaale ahaan, haddii aad tahay MBA waxay shaqo ka heshay Dubai la shirkadayada. Waxaan dhab ahaantii kaa caawin karnaa inaad noqoto dalxiis caalami ah oo ku yaal Imaaraadka Carabta.
Sida si muuqata loo arki karo qalabkan shaqo raadinta ee taleefanka gacantu wuxuu u kacayaa inuu sii joogo tobanka sano ee soo socota. Ugu yaraan ilaa 2020 EXPO shaqooyinka Dubai mustaqbalka. Dhaqan ahaan, dad badan oo xirfadlayaal ah oo Dubai ku shaqeeya ayaa waxay iloobeen barnaamijyo kale oo warbaahinta bulshada ah sida Linkedin. Waqtigan xaadirka ah, waxay bilaabaan inay tixgeliyaan WhatsApp sidii qalab loogu iibsado suuq geynta shakhsi ahaaneed. Ilaa waqtigan xaadirka ah ee xirfadlayaashu waxay bilaabaan xitaa ololeyaal waxay bartilmaameedsadaa wakaaladaha shaqaalaynta ee xayeysiiska shaqada ee ku haboon.
Dubai Job WhatsApp - Ger shaqo maanta!
Dubai Jobs on WhatsApp ee Qoritaanka Caalamiga ah
Si aad ugu bilowdo qalab cajiib ah WhatsApp oo aan la daahin waa inaan dhahno waa 100% bilaash. Waad u diri kartaa farriimaha inta ugu badan adduunka (dalal ka mid ah 184) adoo siinaya barnaamijkan amaanta soo-gaadhista caalamiga. Asal ahaan, App waxaa loo adeegsadaa 55.6% guud ahaan tirada aadanaha adduunka. Isku soo wada duuboo, waa runtii mid sahlan oo wax ku ool ah mareegta loogu talagalay dadka ajnebiga ah ee qorista haweenka.
Waqtiga la joogo maamulayaasha HR ee adeegsigaan adeegsigooda si aad ugu adkaato inay helaan musharixiinta. Dhammaanba sida ugu dhakhsaha badan ee aad u maleyneyso musharaxi shaqo oo ka socda UAE, Qatar, Saudi Arabia iyo Canada. Dhanka kale WhatsApp waa waliba aalad aad u wanaagsan oo lagu gaari karo musharixiinta aan isticmaaleyn taleefanada bulshada kaliya. Isla waqtigaas ha fadhiyin oo ha ka sugto fursadaha shaqo Dubai. Si dhakhso leh u bilaw oo samee waqti ku habboon oo ad wacdid a wakiilka shaqaaleynta.
Dubai Job iyo Kooxda WhatsApp
Caddeynta ugu badan ee lagaa rabo inaad hesho inta ugu badan WhatsApp raadinta shaqo. Si aaney aheyn hababka kale ee habka fariimaha deg dega ah. Waxay kaa caawineysaa inaad si toos ah uga hesho wakaaladaha shaqaalaynta. Sida xaqiiqda ah, waxaad shaqo ka heli kartaa Dubai sida shaqo raadiyaha Philipino. Waxaad ubaahantahay inaad abuurto iyo ku biir WhatsApp kooxaha UAE. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, Tan ayaa ah tan ugu wanaagsan ee WhatsApp muujinta ugu habboon ee shaqaaleysiinta u adeegsata.
Waxaad ku biiri kartaa kooxdayada shaqaalaynta ee WhatsApp. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan abuuray kooxaha 50 halkaas oo aad u diri karto CV-gaaga. Ujeedada shaqo raadinta mid kasta oo ka mid ah kooxaheennu waxay leeyihiin ilaa xubno 256 iyo shaqaale firfircoon iyo shaqaale raadinaya. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdayadu waxay isku dayeysaa in ay abaabulaan boos kasta oo shaqo qorista. Waxaa la oggol yahay kaliya hal xayeesiin kasta oo qora kasta iyo mid dib u soo dajinta mid kasta shaqo-dooneyaasha ku sugan UAE.
Shaqaaleynta WhatsApp wakiilada waxay u jawaabaan dadka shaqo doonka ah
Ujeedada loogu talagalay shaqooyinka Dubai, waxaanu qabanqaabinaa qof kasta oo qoraaya si uu u sameeyo boosto. Mid kale Furaha adiga kuu gaarka ah waa inaad raadsato wakaalad shaqaale. Isla mar ahaantaana haddii aad raadineyso kaalin Saliid iyo Gaas sahlan Upload Resume. Shirkadda Magaalada Dubai, dhab ahaantii, waxay abuurtay a la xiriira koox ku sugan UAE. Isla mar ahaantaana, waxaan isku dayeynaa inaan sida ugu wanaagsan suuqa uga soo baxno. In kasta oo tani ay run tahay 80 boqolkiiba musharixiinta iyo xubnaha kooxda ma sugaan jawaab ka timid wakiilada shaqo ee Imaaraadka.
Dhinaca kale, our Isticmaalaha WhatsApp iyaga oo diraya telefoonadooda iyo cinwaanka cinwaanka maalin kasta maamulka madaarka Dubai. Kooxaha WhatsApp ee kooxda, xitaa waad heli kartaa caawinta helitaanka shaqooyinka suuq-geynta ee Dubai iyo Abu Dhabi. Isla mar ahaantaana haddii aad had iyo jeer ku darto lambarka taleefankaaga wakiilada shaqaaleynta iyo shirkadaha aad masuul ka tahay Shirkadda Dubai City.
Dubai Job WhatsApp - Tuur taleefankaaga, oo ku xir shaqo.
Sideen si dhakhso ah u heli karaa jawaabo oo aan abaabulo shaqo?
Ujeeddadan, waxaad si dhakhso leh u abaabuli kartaa shaqo raadintaada. Iyo kuxiro musharixiinta shabakadaha shaqooyinka Dubai ee adiga oo kale ah. Ujeedada loo kala soocayo musharixiinta goob ay ku yaalliin sida Dubai ama Abu Dhabi. Xirfadda mihnadda ama xitaa kala-sareynta ayaa sidoo kale muhiim ah. Si aan loo dhihi wax kale Dalbadayaasha dalxiisayaasha ee dadka shaqo doonka ah ee Hindida ah ee jooga UAE. Halkee ka dhigeysaa mid sahlan dirista CV.
Dhanka kale, waxaan kaa caawin doonaa inaad u dirto macluumaad laxiriira hortiina dadka saxda ah. Ayaa shaqaaleysiinaya dhamaan magaalada Dubai? Annaga oo kaashanayna maareeyayaasha shirkadaheena sare, waxaan bixinaa xoogaa caawinaad ah abaabulida dhaqdhaqaaqaaga Dubai. Si kale haddii loo dhigo, abuurista magacyo shaqo oo cajiib ah iyo abuuritaanka shaqaalaynta mobilada. In alla inta aruurinta barkadaha cusub ee karti-xirfadeedka loogu qoro shaqaaleysiinta WhatsApp-ka ayaa naga dhigaysa mobilada ugu fiican shirkad qorista ee Bariga Dhexe.
Isku xir dadka shaqaaleysiinta leh Job Application Application WhatsApp.
Whatsapp Kobaca Shaqooyinka ee Dubai
Xaaladda badanaa waa la iska indho tiray markaad shaqo raadinayso si deg deg ah oo aad u dhaqso badan u abuurista CV cusub. Waxaa muhiim ah in aad qaladaad ku sameysid CV-gaada kaa caawiya shaqo ka raadso Dubai. Si aad u tilmaanto caddaynta ugu adag marka ay musharrixiintu diraan fariin toos ah WhatsApp si loo qoro. Oo aan jawaab ka helin wareysigii ay u baahnaayeen si ay ugu noqdaan CV-ga. Oo dib u bilaw adoo tixraacaya faahfaahinta iyo kor u qaado xiisaha maareeyaha HR ama agaasimaha shaqaalaynta ee Dubai. Sida iska cad, xitaa waad u diri kartaa sawirro wata shahaadooyinkaaga Shirkadaha Dubai.
Sidaa darteed waxaad sidoo kale sameyn kartaa deg degsiimo deg deg ah oo fiidiyow ah oo WhatsApp ah oo aad u dirto maamulayaasha shaqaaleynta. Sababta oo ah samaynta aad codsi shaqo aad u fiican iyo fududahay inaad tagto kuu oggolaato si loo helo shaqo ka fiican Dubai City. Iyo falanqaynta ugu danbaysa, siyaabo kaa caawiya inaad isa-xoojiso suuq-geynta si aad u noqotid musharrax shaqo aad u sii wanaagsan maamulaha qorista.
Waxa kale oo aad abuuri kartaa kooxaha WhatsApp ee Dubai Job:
Si aad u bilowdo furan Codsiga WhatsApp oo u gudub shaashadda
Qeybta ugu badan, waxaad tagtaa meesha ugu sareysa ee shaashadda WhatsApp, guji oo fur fur kooxda cusub
Helo shaqooyinka bangiyada iyo qorista Bariga Dhexe
Dhamaan xubin ka mid ah xubin ka mid ah ka mid ah xiriiriyahaaga
Guud ahaan guji qaybta icon-ka iyo bedelida sawirka kooxda
Si loo soo koobo waxaad u baahan tahay inaad ku darto magaca Kooxda WhatsApp
Falanqaynta ugu dambeysa, abuur shaqo cusub oo cusub oo aad adigu ku dhamaysay koox cusub oo moobiile ah
Dubai Job? Qorshaha taleefanka ee WhatsApp waa furaha!
Sida kor ku xusan, fiiri fiidiyaha WhatsApp ee ballanqaadka. Dhab ahaantii waa muhiim kale oo muhiim ah ayaa kuu sharraxaya sida Codsiga WhatsApp wuxuu dhab ahaantii shaqeeyaa. Gaar ahaan waxaan jeclaan lahayn inaan ku tusno sababta WhatsApp ay u fiican tahay Ikhtiyaar aad kula xiriirto maareeyayaasha HR, saaxiibbada, iyo dadka kale ee ku sugan Imaaraadka Carabta. Mar dhow ama goor dambe waxaad kala soo bixi doontaa barnaamijka taleefanka ee WhatsApp.
Rajo inaad rabto inaad isticmaasho si aad ula xidhiidho dadka kale aduunka. Barnaamijka shaqada ee Dubai sida WhatsApp waa qalabkii ugu weynaa abid abid. Gaar ahaan haddii aad raadineyso fursado shaqo haddii aad ka timid Hindiya. Dabcan, waxaan jeclaan lahaa in la dhigo caasimadda Imaaraadka Carabta.
Shirkadda Dubai City ayaa sidoo kale ka caawisa dadka inay helaan maalin kasta. Gaar ahaan si aad u hesho Talo-bixinta shaqo-xirfadeedka Dubai ee shaqo raadinta iyo siyaabaha suuqa aad naftaada. Waxaad si sahal ah ugu kobcin kartaa CV-gaaga dhowr waaxood iyo kooxo bulsheed. Sababtoo ah dalacsiinta ayaa fure u ah helitaanka xirfad shaqo oo cajiib ah gudaha Imaaraadka Carabta. WhatsApp waa mid ka mid ah agabyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay ujeeddada suuqgeynta ee laga isticmaalo Dubai.
Xafiiska shaqada ee Dubai - WhatsApp isticmaal riix ogeysiinta si ay kuugu digaan
Dib u dhac la'aan WhatsApp shabakadda shaqooyinka Dubai dadka isticmaala ogeysiisyada codsiga marka fariin la akhriyo. Dhanka kale, farriin facebook ah ayaa cusbooneysiiyay doorasho aad u fiican. Sidaa daraadeed isbedelka isbeddelada shirkadaha kale ee badan ayaa sidan oo kale u bedelaya nidaamka fariinta tooska ah. Hadda waxaad samayn kartaa shaqo ka raadso hoteelka Dubai on WhatsApp. Sababtoo ah WhatsApp Isbeddelka wuxuu bilaabmayaa 2016. Si aad u muuqata u oggolow dadka isticmaala marka ay isticmaalayaasha kale akhriyeen fariin loo diray. Sidaas darteed maskaxda ku hay, haddii qof kale ku hadlo muddo dheer.
Iyo gaar ahaan jidka dheer ka jawaabtaa waxaad si fudud u dhaqaaqi kartaa oo la sheekaysan kartaa dadka kale. Caddayn badan oo qasab ah markaad la hadlaysid naagta waxay u badan tahay in aysan sinaba dan u ahayn. Waxkastoo aad sheegtid ama waxaad qabatid. Dhinaca taban, ma u adeegsan doontid barnaamijkan kaliya si aad shaqo u hesho Dubai 2018. Xaaladahan oo kale, hubso inaad u qorto qof ku haboon oo aan la xariirin WhatsApp shaqada Dubai.
Dhab ahaan fadlan ku dar faahfaahin soo socota si aad u hesho shaqo
Dhab ahaan, ku dar nambarkaaga WhatsApp!
Faahfaahin gaaban ee khibradaada shaqo
Wakhtiga aan daahin noo sheeg (meesha aad jeclaan lahayd in la meeleeyo)
U dir codsi wakiilada shaqaaleynta Whatsapp
Meelaha hore, wax walba oo la tixgeliyo kuwa kale shirkadaha shaqo raadinta. Laakiin shirkadayada, si dhaqso leh ayaan uga jawaabnaa waxaan ka caawineynaa musharixiinta shaqo raadinta in la meeleeyo. Si kale loo dhigo, Whatsapp Dubia waxaad la yeelan kartaa wadahadal gaagaaban wakaaladaha shaqaaleynta. Dhanka kale, u dir wixii faahfaahin ah eek u saabsan Shirkadda Dubai City. Markaa mar labaad haddii aad rabto kulan aad la yeelato wakiillada shaqa qorista waxaad u baahan tahay inaad xawaareyso. Waxaanu kuu qabanqaabin karnaa waraysigaaga magaalada Dubai. Si aad uga hadashid wax kulan ah oo aan si degdeg ah loo xakameynin maareeyayaasha shaqaalaynta adoo isticmaalaya Kooxda WhatsApp wada sheekeysiga Imaaraadka Carabta. Inkastoo tani run tahay laakiin adeegsiga WhatsApp mobile loogu talagalay qorista. Waxaa laga yaabaa in ay ka duwan tahay isticmaalka Skype iyo dhammaanteed taas oo micneheedu tahay waxaad ku badbaadin doontaa waqti badan markaad la falgaleyso kartida hay'adaha shaqaaleysiinta ee Dubai.
Waa maxay sababta WhatsApp macaadinta midabka cagaaran?
Hase yeeshe, waxaynu ku bilaabi doonnaa sababta iyo waxa macdanta midabka cagaaran: Midabka cagaaran macdanta nolosha cusub, tamarta cusboonaysiinta, dabeecadda cusub, iyo bilowga tamarta. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo waxay la xiriirtaa koritaanka la siiyay. Xaqiiq ahaan, wada noolaanshaha ayaa fure u ah, furfurnaanshaha markaad eegto midabkaas iyo aamin u ah deegaanka iyo jawiga. Dhanka kale, cagaarka ayaa sidoo kale loo yaqaan hab gaar ah oo caado ah oo la xidhiidha lacagta doollar. Dhaqaale gaar ah oo ku yaal Dubai, midab banki ayagoo fiiro gaar ah u leh kobaca, iyo soo celinta hamiga.
Waa muhiim inaad garato inaad qeexitaankan ka heli karto Bing, Yahoo, iyo Google si aad naftaada u fiirin karto. Sababtaas awgeed halkii laga sugi lahaa saacadda ee shaqaalaysiinta. Taasna waxay keentay in loogu yeero astaanta dhalaalaysa. Had iyo jeer waad diri kartaa shaqaalaynta shirkadda ilaha shaqaalaha ee shirkadaha Emirates maareeyayaasha mar kasta oo kugu haboon.
Waa in la xasuustaa in shirkadaha kale ee Dubai
Isticmaalka midabka cagaarka ah sida WhatsApp ayaa leh muuqaal hoose
Caddayn badan oo qasab ah sababta midabaynta WhatsApp calaamad waa cagaar.
Waxa la yaab leh waxaan imminka u imid su'aasha saxda ah iyo waxa ay tahay in lagu xasuusto marka laga hadlayo xirfadaha Imaaraadka. Iyada oo la adeegsanayo WhatsApp, waa falanqayn macquul ah oo macquul ah oo loogu talagalay WhatsApp sababta loo adeegsado midabka cagaarka. Si kasta oo ay tahayba mustaqbalka fog ee ka soo baxda kor ku xusan oo leh Whatsapp midab GREEN. Si dhakhso ah ama goor dambe waxaad ogaan doontaa qodobbada ugu muhiimsan ee aad ka fiirsaneyso sababta midabku u sababayso heer aad u wanaagsan oo soo degsashada leh barnaamijkan moobiilka. Isticmaalayaasha guud ahaan waxay ku hadlayaan inay dareemaan nabadgelyo marka ay isticmaalayaan astaan ​​cagaaran. Waxyaabaha oo dhan waxaa loo tixgeliyaa iyada oo kucusub naqshadda WhatsApp.
Iyo sida tan lagu xusay tan codsiga mobile wuxuu dadka ku dhiirrigeliyaa oo ku xiran lacag la'aan in la bixiyo wixii weligaa jiray. Dubai Job WhatsApp waa habka ugu dhaqsaha badan ee shaqooyinka.
Dubai Job WhatsApp - Qalabka ugu fiican shaqo raadin ee Bariga Dhexe.
Isticmaalidda isticmaalka WhatsApp
Dhanka kale, dhinacyada dhinacyada WhatsApp cusub horumarka UAE. Marka la eego ganacsi horumarinta midab cusub iyo firfircoonida midabka cagaarka ayaa muhiim u ah hore u socodka. Xaqiiqdii, shirkadda suuq-geynta suuqa shaqada aragtida ayaa ku weyn Expo 2020. In aan wax laga dhihi ka dhigin lacag lagu sameeyo wakiilada shaqaalaysiinta. Sidoo kale isticmaalayaasha mobilada ee Facebook ayaa qabatima. Waqti badanna ku bixi intii karaankooda ah sheekaysiga khaaska ah halkii aad ka isticmaali lahayd shaqo raadinta Dubai ee telefoonka gacanta.
Dubai Job WhatsApp - Hada u isticmaal shaqo raadin. Raadi inbadan ku saabsan u guurista Dubai, Imaaraadka Carabta.
Marna ha daynin inaad soo iibsato kuwa saxda ah ee saxda ah!
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waad daali doontaa oo dib u diri kartaa oo sidaan u isticmaali kartaa codsiga mobile-ka ma fududa. Si aad u hesho dhammaadka maalinta ka danbeysa shaqo joojinta Whatsapp ee shaqo raadsasho ahaan waxaad raadineysaa hoosta. Sida xaqiiqda ah aragti ah qaadashada shaqada baabuurta ee Imaaraadka. Samaynta lacag dheeraad ah oo ku saabsan aragtida xirfadeed ee cusub ee aad u baahan tahay ayaa kaa qaadi doona.
WhatsApp qarsoodi shakhsi ahaaneed ee ka jira Imaaraadka Carabta
Hore ama wixii ka dambeeya xirfadlaha xirfadlaha ah ayaa hadda ku qeexay. Sida iska cad, taasi WhatsApp ugu dambayntii go’aansaday midab cagaaran kiiskaas. Iyada oo la raacayo cilmi-baarista ganacsiga barnaamijkan wareega. Guud ahaan marka la isticmaalo, marka aad isticmaaleyso appka waxaad sababi doontaa dareen ah in bini aadam kale uu fiicanyahay isha laga helo macluumaadka isgaarsiinta dhijitaalka ah ee ku yaal Dubai. Badbaadada fog marka hore marka aad taleefan isticmaasho. Sida la xusay intaad ula xidhiidho kuwa kale si qunfuun fadlan fadlan faahfaahintaada si gaar ah u xafid. Sababta oo ah faahfaahinta shaqsiyadeed darteed, kiis kasta, waa la isticmaali karaa ama la xadi karaa. Inta badan, qof walba wuxuu rabaa in qarsoodiyadooda si dhab ah loo tixgeliyo gaar ahaan Bariga Dhexe. Dubai ahaan Magaalo ahaan waa furaha guusha.
Dubai Job Whatsapp - sida loo helo? gabagabeyn shaqo raadintaada
Falanqaynta ugu dambeysa ee taleefanka gacanta ee WhatsApp, barnaamijku wuxuu noqonayaa aalad waxtar u leh kaliya ugaarsadeyaasha shaqo doonka ah. Asal ahaan ee loogu talagalay dadka raadinaya shaqo Dubai. Marka la eego qodobbada, musharax u adeegsanaya casriga ah ee loogu talagalay 2019 qorista Dubai. Isku soo wada duuboo waad ku kalsoonaan kartaa kooxaha WhatsApp-ka ee Imaaraadka Carabta. Si xaqiiq ah u daawashada iyo ku tiirsanaanta kooxaha WhatsApp aad ayey uga xawaare badan tahay adoo adeegsanaya warbaahinta bulshada sida Facebook ama LinkedIn ama xitaa emayl ah. Ilaa iyo hadda WhatsApp wali waa bilaash mana u baahnid inaad iibsato koonto lacag bixin ama aad bixiso khidmadda dheeriga ah si aad shaqo u hesho. Marka la soo koobo waxaad badbaadin kartaa waqtigaaga iyo lacagtaada adoo gaaraya wax badan shaqooyinka ay bixiyaan dhamaan Bariga Dhexe.
Shaqooyinka Dubai ee WhatsApp
Guud ahaan ka hadalka halkaas runtii waa guul-guul marka aad shaqooyin ka raadiso Whatsapp. Waxaa laga yaabaa in nuxurka 85% waad ahaan doontaa shaqo ka raadso Dubai laga bilaabo Koonfur Afrika marka aad u adeegsato WhatsApp aalad shaqo qoris. Maxaa yeelay WhatsApp waa aaladda ugu fiican loogu talagalay kuwa cusub iyo mustaqbal doonka ah. Shaqooyinka Whatsapp-ka waa sahlan tahay in la helo waxaadna awood u yeelan doontaa inaad la xiriirto shaqaaleysiinta kuwa ku dhow fool ka fool.
WhatsApp waa farriin aad u caan ah oo Hindiya ah. Tusaale ahaan, waad awoodi kartaa si sahlan shaqo uga helaan Hindiya oo ku taal Dubai iyo Abu Dhabi. Shirkadeena waxay caawineysaa shisheeyaha ka yimid suuqa shaqada caalamiga ah. Markaad tixraacdo qodobbadan, waxaad ka heli kartaa mihnad iyo a qaab nololeed cusub oo ku yaal Imaaraadka Carabta. Haddii aad shaqo ka raadinayso Dubai waa inaad ku biirtaa kooxdeena WhatsApp ee Dubai.
Fadlan faahfaahin faahfaahin ka eeg boggayaga internetka waxaanna kordhinaynaa fursadahaaga shaqo helida. Waa inaad ku biirtaa kooxdayada magaalada Dubai oo ku dar taleefankaaga waqti kasta kooxaheena. Oo iska diiwaan gali anaga Kooxda Shaqaalaha ee Dubai Job WhatsApp.
Shirkadda Magaalada Dubai oo had iyo goorba bixisa caawinta gacan-u-kaca cusub ee qurbaha.
Shirkadda Dubai City hadda bixiya tilmaamo wanaagsan ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, talooyin iyo shaqo ka helis Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.